आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२० मंसिर २०७७ शनिबार, ५ डिसेम्बर २०२०) – eSajha News
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२० मंसिर २०७७ शनिबार, ५ डिसेम्बर २०२०)
प्रकाशित मिति: २० मंसिर २०७७, शनिबार ०७:२७
श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ हेमन्त ऋतु वि.सं. २०७७ मंसिर २० गते शनिबार तद्अनुसार सन् २०२० दिसेम्बर ५ तारिख मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथि तिष्य नक्षत्र ब्रम्हा योग ५ः२३ पर ऐन्द्र योग गर करण आनन्दादिमा मित्रयोग चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः४१ बजे र सूर्यास्त साँझ १७ः७ बजेमा हुनेछ ।
मेष – मान प्रसिद्धि बढ्लान् । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । धनको आगमन हुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । हास विलासमा पनि रुची बढ्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु र विलासको बस्तु बढ्लान् । विजय मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला ।
बृष – अन्नधन वृद्धि होला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । नयाँ आयस्रोत बढ्नुसँगै उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ । घर–परिवारको स्थिति अनुकूल रहला, साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । धनसित सम्बन्धित वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति महत्व ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
मिथुन – प्रगतिशील रहनुहुनेछ । आर्थिक र पारिवारिक क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । हाकिमको साथ मिल्नेछ । सुखशान्ति ऐश्वर्यमा वृद्धि होला । कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । मनअनुकूल कार्य बनेर मन प्रशन्न हुनेछ । मान पुरस्कार प्राप्त होला । विजयश्री मिल्ने छ ।
कर्कट – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा रुचि बढ्ला । मनोकूलको कर्ममा प्रवृत्ति बढ्ला । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु हितकर होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आनन्दमा वृद्धि होला । आरोग्यतामा ध्यान राख्नुपर्नेछ । यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ । दूरदेशको काम बन्नेछ । मानसम्मान ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति बढ्नेछ ।
सिंह – कुनै प्रकारको खर्चमा नलाग्नु उचित होला । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सचेत रहनुपर्नेछ । नियम कानुनलाई पनि विशेष ध्यानमा राख्नुपर्ला । ऋण, रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुहोस् । अरुको भरमा नबस्नु बेस होला ।
कन्या – रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ काम पनि बन्नेछ । मान महत्व बढ्नेछ । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्ला । सुखशान्ति ऐश्वर्य अभिवृद्धि हुनेछ । साझेदारीको कार्य बन्नेछ । आरोग्यता अभिवृद्धि हुनेछ । मीठो भोजन पाउनुहुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । हाँस विलासमा रुचि बढ्नेछ । ख्याती फैलिने छ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ ।
तुला – यात्रा हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । रोकिएको कार्य बन्ला । नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक कार्य बन्ला । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न भइजानेछ ।
वृश्चिक – प्रेमपथमा प्रगति होला । काममा सफलता पाउनुहुनेछ । सद्कर्म पथमा प्रगति होला । भाग्योदय होला । आफन्तको सहयोग बढ्ला । साथीसित भेटघाट हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफल हुनुसँगै गीत-संगीतमा पनि आकर्षण बढ्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग पाउनुहुनेछ । सन्तान सुख बढ्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । शैक्षिक र रचनात्मक कार्य सफल रहनेछ । धैर्य र संयमले काम गर्नुहोला ।
धनु – भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन । आफ्नै बल विवेकले कार्य गर्नु बेस रहला । देखिएको समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ । शारीरिक र आर्थिक हित हुने काममा लाग्नु उपयुक्त रहनेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन । हांसविलास खेलकुद भ्रमण आदिमा रुचि बढ्ला । जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति बढ्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य बौद्धिक र रचनात्मक कार्य आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
कुम्भ – धनसम्पत्ति बढ्नुको साथै आरोग्यता पनि बढ्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूल रहनेछ । कार्यव्यवस्था क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सभा-समारोहमा पुरस्कार पाउनुहुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्ने छ । विजयश्री मिल्ने छ । आरोग्यप्रद काममा सफलता मिल्नेछ । आनन्द बढ्नेछ । सुख शान्ति बढ्ला ।
मीन – समय शुभ भाग्यवर्धक छ । प्रयासरत काममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । विकास होला । सुख-सुविधा बढ्नेछ । मनअनुकूलको काम बन्नेछ । मीठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । सुखी र सफल रहनुहुनेछ । रोगबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ । यात्रा होला । सन्ततिसुख बढ्ला ।
२० मंसिर २०७७, शनिबार ०७:२७ मा प्रकाशित
हिउँ नपर्दा किसान चिन्तित, हिमालका आधाभन्दा बढी भाग कालापत्थरमा परिणत
सडक क्षेत्र पन्द्र पन्द्र मिटर कायम हुनु पर्ने
उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहजताकालागि २५ छात्रालाई साईकल
माछापुछ«े बैंकका तलबी खाता संचालकहरुलाई १४ लाख १० हजार रुपैया बराबरको बीमा तथा औषधी उपचार योजना
बैंकका प्रवन्धक देवेन्द्र के.सी.ले शिक्षक रवि प्रसाद कुर्मीलाई औषधी उपचार खर्च वापतको चेक रकम हस्तान्तरण गर्दै साझा न्यूज । तौलिहवा (कपिलवस्तु) माछापुछ«े बैंकमा तलबी खाता होल्डरलाई..